Ukuthengiswa kwezinhlobo ezahlukahlukene zesikrini esidlidlizayo | Haiside
Haiside uphikelele ekusebenzeleni wonke amakhasimende ngokwethembeka nangokuthembela iminyaka eminingi
Isikrini se-Banana Vibrating
Isikrini se-Arc Vibrating
High Frequency Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni Isixwa Screen
Isikrini esidlidlizelayo esikhiqizwe yinkampani yethu sisebenzisa imiqondo esezingeni eliphakeme yokuqamba kanye nokuhlaziywa kwezinto ezinomkhawulo nezindlela zokubala, futhi ifakwe ukucutshungulwa kokulawulwa kwamanani okuthuthukile, ubuchwepheshe kanye nemishini yokuhlola ukuqinisekisa ikhwalithi nokusebenza komkhiqizo nokuphepha kwesikrini.
Komugqa isixwayisi screen
Isikrini sokudlidliza kobhanana
Isikrini sokudlikiza se-Arc
Imvamisa High kwesidlidlizi screen
Eminye Imikhiqizo Xhumana nathi
VIBRATING SCREEN Ukucaciswa
Isendlalelo esisodwa sesikrini sokudlikiza esivundlile I-HLG 1836、1848、1861、2436、2448、2461、3036、3048、3052、3061、3073、3630、3636、3642、3648、3655、3661、3667、3673、4361
Isendlalelo esidlidliza kabili sesikrini HLK 1848、2448、2461、3048、3052、3061、3661、3673
Isendlalelo esisodwa sebhanana sokudlidliza isikrini HLO 1848、1861、2161、2448、2461、2473、2496、3061、3073、3085、3661、3673、3685、4361、4373、4390、4973
Isendlalelo sokudlidliza ubhanana wesendlalelo esimbili HLD 2461、3061、3073、3661、3673、3676、4385
Imvamisa High kwesidlidlizi screen HLV 0924、1236、1530、1836、1848
Gcina ngcono izinga kanye service ephelele
IZINHLELO ZOBUCHWEPHESHE BESIKRIBE SOKUTHUTHUKISA
Amapuleti ohlangothini wesikrini nezimbambo eziqinisayo (i-angle yensimbi) konke kuphakanyiswe ngamabhawodi we-HUCK ngaphandle kwama-welds. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ipuleti eseceleni ayinakho ukugxila kwengcindezi nokuqhekeka, ithuthukisa amandla nokuqina kwepuleti eseceleni, ngaleyo ndlela ithuthukise ukuthembeka kwemishini.
Umhubhe ovusa amadlingozi wesikrini nodonga lwesikrini luqala ukwakheka okwenziwe ngebhokisi okwenziwe ngebhokisi okunezimbambo eziqinisa ngaphakathi ukuqinisa ukuqina namandla omshini wesikrini nokunciphisa isisindo somshini wonke. Ngaleyo ndlela kuthuthukiswa ukusebenza kahle kwawo wonke umshini nokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla.
Zonke izindawo zokumatanisa zemishayo nemishayo yokudlidliza yesikrini iyacutshungulwa ngamathuluzi womshini we-CNC othomathikhi ngaphambi kokuhlangana. Izakhiwo ezingacutshungulwanga zazo zonke izinto zifakwa sandblasta futhi zipendwe nge-epoxy resin. Zonke izikhala zizogcwaliswa ngeglue engangeni manzi. Qiniseka ukuthi ayigqoki.
Ubuso besigxobo sohlaka lwesikrini bufuthwa ngengubo emelana nokugqokwa kwe-polyurethane eminyene yokuhlinzeka ngempilo yesevisi yesigxobo.
Amapharamitha okudlidliza asethwe ngokufanelekile ukugwema amaza emvelo ezingeni ngalinye lomzimba wesikrini futhi anciphise umthelela wokuphakama kwezwi;
Isikrini esidlidlizayo sinokwakheka okulula nokuhlangene, ukuqina okuphezulu, amandla aphezulu, ukusatshalaliswa kwamandla okulinganisela, nesici esikhulu sokuphepha;
Isisindo jikelele somzimba wesikrini singancishiswa ngezinga elikhulu kakhulu ngaphansi kwezimo ezihlangabezana nezidingo zazo zonke izici zesikrini esidlidlizayo. Yenza sonke isikrini sokudlidliza sibe namandla aphezulu, isisindo esincane, amandla wokucubungula amakhulu, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, umfutho omkhulu wokudlidliza nokusebenza kahle kokuhlola;
Izingxenye zokuxhuma zemishini zihlangene nobuchwepheshe bokunciphisa umsindo, ukuze umsindo wesikrini sonke uphansi lapho usebenza, futhi umsindo ongaphakathi kwe-1m kusuka kwimishini ungaphansi kuka-80db;
Isigaba esiningi, ukuthambekela kwesikrini sokuthambekela okuningi kusiza ekukhishweni kwempahla futhi kunciphisa isilinganiso sokuvimba imbobo.
Ukwamukela ukumiswa kwesikrini somkhiqizo wasekhaya wasekhaya, ukusethwa kohlobo lwebhulokhi encane, isihlalo sesitimela esimisiwe, ukufakwa okulula nokusheshayo nokufaka esikhundleni, nokusebenza kahle kokuhlola okuphezulu;
Isikrini ngasinye esidlidlizayo sihlanganiswe ngokuphelele ngaphambi kokushiya ifektri futhi sihlolwa isivivinyo sokungenzi lutho amahora angu-8. I-amplitude nobuningi buhlolwa ngethuluzi le-VB, futhi ijika lokusebenza lidonswa ngendlela yokudidiyela ukuqinisekisa ukuthembeka;
i-frequency analyzer ihlolwe amahora angama-72 Ngalesi sikhathi, kutholakala imvamisa yemvelo, bese idatha eqoqiwe ilayishwa kukhompyutha ukuze ihlaziyeke izinto ezithile ukuqinisekisa ukuthi isikrini ngasinye esidlidlizelayo singafinyelela ekukhiqizeni okusebenzayo nokuphephile.
ISIMISO SOKUSEBENZA KWESIKHATHI SOKUTHUTHUKISA
Isikrini esivundlile esiqondile nesikrini sebhanana
Imoto ivuliwe futhi iqale, futhi amandla okushayela adluliselwa kushaft enkulu yokushayela ngokusebenzisa indlela yokushayela ibhande kanye nohlelo lwesibili shaft. I-shaft shaft enkulu ishayela isivunguvungu sesikrini esidlidlizelayo ukukhiqiza amandla wokudlidliza okuqondile. Ukuqondiswa kwamandla okuzijabulisa kusekhoneni lika-45 ° kuye phezulu. Umugqa wokudlidliza oqondile usebenza emzimbeni wesikrini ngokuqhubekayo ukwenza umzimba wesikrini udlidlize entwasahlobo ye-buffer. Ngasikhathi sinye, intwasahlobo ye-buffer inciphisa umthwalo onamandla womzimba wesikrini esisekelweni sokusekelwa komshini wesikrini futhi yehlisa umsindo womshini wesikrini. Umzimba wesikrini ushayela indawo yesikrini ukuthi idlidlize ngokuvumelanayo. Amandla adluliselwa kokuqukethwe esikrinini, futhi okokusebenza komthelela kubekiwe ngaphambi kokuphonswa phezulu esibukweni bese kwahlukaniswa ngosayizi wezinhlayiyana ocacisiwe. Okokusebenza kubhidlizwa ngokuqhubekayo kusuka kusigaxa sokondla kuya kupuleti lokwamukela, futhi kuhlolwe ebusweni besikrini. Okuqukethwe okuphansi kukhishelwa ku-chute engaphansi kwesikrini, futhi okokusebenza okungaphezulu kwesikrini kukhishelwa ku-chute wokukhipha.
Ama-motors amabili adlidlizayo anamapharamitha afanayo afakwe ngokuvumelanayo kugongolo lokuthakazelisa ngokuvumelanayo nangokuphambene lapho exhunywe kugesi, futhi ngayinye yakha amandla we-centrifugal wobukhulu obulinganayo. Izingxenye zamandla womabili esiqondisweni sokudlidliza mpo ziphambene ukuze zikhansele enye nenye, futhi izinto ezisesiqondisweni sokudlidliza okuhambisanayo ziyahambisana. Umugqa wokudlidliza oqondile uphakanyisiwe ukwakha amandla wokudlidliza okuhambisanayo. Umugqa wokudlidliza onamandla osebenza ngokujikeleza futhi ngokuqhubekayo emzimbeni wesikrini ukwenza umzimba wesikrini udlidlize entwasahlobo ye-buffer. Ngasikhathi sinye, intwasahlobo ye-buffer inciphisa umthwalo onamandla womzimba wesikrini kusisekelo sokusekelwa komshini wesikrini. Umzimba wesikrini ushayela indawo yesikrini ukuthi idlidlize ngokuvumelanayo. , Amandla adluliselwa kokuqukethwe esikrinini, impahla yomthelela iphonswa phezulu esikrinini ukuze iphelelwe amanzi emzimbeni, okokusebenza kufakwa ngokuqhubekayo kusuka ku-chute yokudla, futhi ukwelashwa kokuphelelwa amandla komzimba kwenziwa endaweni yesikrini. Umbundu wezinto ezibonakalayo.